Puntland oo xirtay labo saxafi oo ka shaqeynayey Radio Daljir, Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidanka booliska gobolka Nugaal ee maamulka Puntland ayaa saaka xabsiga dhigey Agaasimaha idaacada Daljir, faraceeda Garoowe, Cabdiraxmaan Xuseen Xasan Gaardi iyo Tifafriraha idaacada Jamaal Faarax Aadan.
Agaasimaha Guud ee Daljir, Axmed Sheekh Maxamed Tall Man oo sheegay in ciidanku xarunta idaacada ugu yimaadeen ka dibna ay u kaxeeyeen dhanka saldhiga Galbeed.
Axmed Tall Man waxa uu sheegay in aysan si dhab ah ugarayn sababta xarigan idaacadana la keenin sababta loo xiray. Tall ayaa caddeeyey inuu aad uga xunyahay falka uu ku kacay maamulka Puntland ee ah xarigga saxafiyiinta.
Radio Daljir xarunteeda Garoowe waxaa shalay Jimcahii ay sii deysay barnaamij ku saabsan xaalada amaanka Puntland, Dhaqaalaha iyo siyaasada dalka.
Dhanka kale, Ururka saxaafada Puntalnd (MAP )ayaa ka hadlay xariga Agaasimaha iyo Tifaftiraha Radio Daljir Garoowe , MAP wuxuu cabaareeyey xariga isagoo ka dalbaday maamulka Puntland in si shuruud la’aan ah ku sii dayso Suxufiyiintan.
Gudoomiyaha Ururka MAP, Faysal Khaliif Bare ayaa sheegay in Ururku ka xun yahay xarigan oo u sheegay in uu yahay mid sharci daro ah, Gudoomiyaha wuxuu sheegay in xarigan xad gudub ku yahay sharciga saxaafada Puntland iyo xuquuqda saxaafada, wuxuu dalbaday in si shuruud la’aan loo daayo.
Milateriga Soomaaliya oo dib ula wareegay Awdheegle & khasaaraha oo aad u badan